Maitiro ekugadzira bhokisi sanganisa kuravira kwakagadzirwa (5 matipi) - Blog
Maitiro ekugadzira bhokisi sanganisa kuravira kunoitwa pamba
Maitiro ekugadzira bhokisi sanganisa kuravira kwakagadzirwa mumatanho mashanu akareruka
Aya ndiwo maitiro ekugadzira bhokisi musanganiswa kuravira kwakagadzirwa. Imi varume munoziva, hapana munhu anoda keke rakagadzirwa kubva pakutanga kupfuura ini! Asi dzimwe nguva, ini ndinongoburitsa kunze kwebhokisi musanganiswa. Kazhinji zve red velvet keke kana keke rechokoreti apo ini ndoda kunaka kwakanaka asi ndisina nguva yekubheka kubva pakutanga. Kana pamwe ini handina zvese zvinoshandiswa paruoko zvandinoda. Izvo zvinoitika ROTI.
Asi ini ndichiri kuda iyo inonaka inonaka! Ini handidi chaizvo iyo 'kemikari' kuravira iyo inogona kubva kubva yakatwasuka kumusoro bhokisi saka heino angu matipi ekugadzira bhokisi kusanganisa kuravira kunoitwa pamba.
Usatya bhokisi kusanganisa
Pane gakava risingaperi pamusoro pezviri nani, kusanganisa bhokisi kana kubheka kubva pakutanga. VAKAWANDA vanhu vachapinda muhondo pasi-kurudyi kurufu pamusoro peiyi. Chokwadi, ndiani ane hanya?
Uchishandisa bhokisi musanganiswa zviri kwauri. Ichokwadi kuti ipfupi-yakatemwa uye dzimwe nguva sarudzo yakanakisa. Vazhinji vevashandi vekeke vanoshongedza kunze uko vanoshandisa zvakagadziriswa bhokisi musanganiswa mumakeke avo ese. Iwe unowana mhedzisiro inoenderana uye iri nyore nzira yekusanganisa.
Chinhu chega chandingapa zano ndechekuti uve kumberi nevatengi vako. Mune dzimwe nzvimbo, hapana angazofunga kana iwe ukashandisa bhokisi kana kana iwe ukagadzira keke kubva pakutanga. Asi munharaunda yangu (Portland) vanhu vanonetsekana zvakanyanya nezve izvo zvavanoisa mumuviri wavo (Portlandia ndeyechokwadi ya'll).
Vatengi vachatumira email kwandiri kuti vasimbise kuti ini ndinobheka kubva pakutanga. Saka ndine chokwadi chekuisa iwo ruzivo pawebhusaiti yangu saka hapana mubvunzo. Kana iwe uri kushandisa yakadzvanywa bhokisi sanganisa iwe haufanire kutaura kudaro mune akawanda mazwi. Unogona kungotaura 'zvakabikwa nyowani zuva nezuva' uye kana iwe uine chaiyo kubvunza nezve kubheka kubva pakutanga, ingova akatendeseka.
Kana iwe uchida mamwe mabikirwo ekuti ungabike sei kubva pakutanga, tarisa yangu yakaedzwa uye yechokwadi keke mapepa paShuga Geek Show.
Zano # 1 pamaitiro ekugadzira bhokisi sanganisa kuravira kunoitwa pamba
Kutanga neyakanakisa bhokisi musanganiswa zvinogoneka. Ndiri musikana waDuncan Hines ini. Mutengo wacho unodhura zvishoma kupfuura musanganiswa wepamusoro webhokisi asi ndinotenda iwe unowana chaunobhadhara. Pasina kutaura Duncan Hines inowanzo kutengeswa saka chengetedza pane ako epamusoro flavour uye unakirwe neese anosetsa anotaridzika iwe aunowana panguva yekutarisa.
Changu chandinofarira Duncan Hines bhokisi musanganiswa zvinwiwa ndiRed Velvet, Katatu Chokoreti, Keke Chena (yekugadzira WASC) uye sitirobheri. Imwe nguva ini handikwanise kuwana duncan hines sitirobheri saka ndichaenda naBetty Crocker. Aya ndiwo ese mabikirwo anotora toni yenguva yekugadzira kubva pakutanga uye ndiwo akanyanya kukumbirwa mafirita kubva kune vatengi vangu. Yeiyo chokoreti vhezheni yeiyi yekubheka tarisa yangu Chokoreti WASC Recipe
sei kugadzira yakanyungudutswa chokoreti kupenya
Zano # 2 pamaitiro ekugadzira bhokisi sanganisa kuravira kunoitwa pamba
Kazhinji bhokisi rinosanganisa rine zvinotevera zvinoshandiswa zvakanyorwa kumashure izvo zvavanoda kuti iwe uwedzere. Mazai, mvura nemafuta. Izvi zvakangwara kumagumo avo nekuti zvakanakisa munhu wese ane izvi zvinoshandiswa paruoko kare.
Chinhu pamusoro pezvisanganiswa izvi hazvo, hachiwedzere zvakawanda kukeke kusvika panonaka.
Tsiva mvura nemukaka kuti uwedzere kunhu uye hunyoro. Kana iwe uri kugadzira velvet tsvuku iwe unogona kushandisa buttermilk.
Tsiva mafuta aine yakanyunguduka ruomba kuti zvakawanda munuhwi uye Homemade magadzirirwo
Pamakeke echokoreti, edza kutsiva mvura nekofi yakatonhora. Ikofi inowedzera chokoreti inonaka! Tora recipe Chokoreti WASC
Zano # 3 pamaitiro ekugadzira bhokisi sanganisa kuravira kunoitwa pamba
Iwe unogona kunge wakanzwa nezvazvo WASC (chena maarumondi anovava kirimu keke) uye akashamisika kuti chii. Ndiyo chaiyo yakanakisa dzidziso yebhokisi musanganiswa wenguva dzese. Iyo tambo, magadzirirwo uye kuravira kweiyi keke ndeye KUTI UFE. Hazvishamise ayo mabikirwo esarudzo kana iwe uchida yakakwana chena keke kune vakawanda vabiki.
Maitiro ekugadzira WASC
Kutanga nebhokisi rimwe remuchena Duncan Hines musanganiswa
Wedzera mune imwe kapu yeupfu weAP
1 mukombe wegranulated shuga
1/4 tsp munyu
1 mukombe muto wakasviba
1/2 mukombe yakanyunguduka mafuta
1 mukombe wemvura kana mukaka
4 mazai machena
1 tsp almond yakabudiswa
Isa zvese zvinongedzo zvako mumudziyo wesimendi yako musanganisi (kana iwe unogona kusanganisa neruoko) uye fambisa pazasi kuti ubatanidze kusvikira wangonyoroveswa. Wobva warova kusvika pakati nepakati uye sanganisa kwemaminetsi maviri kuti ukudziridze mameseji uye chimiro chekeke.
Dururira batter yako mumapani ako akagadzirwa. Ini ndoda kushandisa gadziriro yepani yakagadzirwa (keke goop) . Iyo yakanakisa yakagadzirirwa pamba pani kuburitswa iripo! Bika pa350ºF kwemaminetsi makumi matatu nemakumi matatu kusvika makumi mana kusvika jekiseni remazino richibuda pakati nepakati zvakachena.
Rega kupora zvachose usati washongedza. Kuti uwane rumwe ruzivo rwekushongedza yako yekutanga keke, tarisa yangu yemahara kudzidziswa maitiro ekugadzira yako yekutanga keke.
Zano # 4 maitiro ekugadzira bhokisi sanganisa kuravira kunoitwa pamba
Ita yako buttercream kubva pakutanga. Ini ndoziva izvi zvinonzwika zvichipesana-intuitive nekuti tiri kuyedza kuenda nyore pano. Pamwe hauna kumbobvira waita buttermukaka wakagadzirwa wega uye unotyisidzirwa. Zvakanaka rega ndiise pfungwa dzako kurerukirwa.
Zvangu nyore buttercream recipe yakapusa, zvinogona kunge kuri kubiridzira. Ingoisa zvese zvinongedzo zvako mundiro, uzvirove kusvikira zvajeka uye zvakapfava. Wobva waita kuti usanganise pazasi nepadhedhi yekunamatira kwemaminitsi gumi kuti ubvise matema.
Voila, yakakwana nyore buttercream frosting.
Uye nzira, nzira, NZIRA zvirinani pane iyo chando kubva kune inogona. Chii kunyange IS icho icho?
Dzimwe sarudzo huru dzechando kwauri
chinotsiva chiDutch chakagadziriswa cocoa upfu
Yakadzikama kirimu chizi kutonhora
Yakadzikama yakarohwa kirimu (ok kune imwe tier makeke asina fondant)
Zano # 5 maitiro ekugadzira bhokisi sanganisa kuravira kunoitwa pamba
Ita kupenga pamwe neyummy kuzadza! Iwe unogona kusada kugadzira keke rako kubva pakutanga asi kuzadza kuzhinji kwekeke kunogona kugadzirwa kubva pakutanga uye zvakapusa nyore.
Edza izvi zvinonaka zvekuzadza keke rako
Marion bheri buttercream
Kokonati pecan kuzadza
Munoona, izvo zvakanga zvisina kuoma zvakadaro? Uri munzira yako yekugadzira keke rinonaka rakagadzirwa kubva mubhokisi. Iwe une mamwe matipi ekuti ungaite sei rako bhokisi sanganisa kuravira kwakagadzirwa? Siya ivo mumashoko!
Yakadzidziswa Bhokisi Keke Recipe (WASC)
Iyo yakasanganiswa keke musanganiswa iyo inonyatso shandiswa nevabiki pasirese pasirese inogadzira inonaka chena keke keke iyo inonaka ingangoita senge kukwenya. Iyi kamukira inogadzira matatu 6'x2 'keke kutenderera kana maviri 8'x2' keke kutenderera Gadzirira Nguva:10 mins Nguva Yakabika:30 mins Nguva Yese:40 mins Makorori:747kcal
▢1 bhokisi (1 bhokisi) chena keke musanganiswa Ini ndinoda duncan hines
▢5 oz (142 g) AP hupfu 1 kapu (yakatorwa mumukombe, isina kubviswa)
▢7 oz (198 g) shuga yakawanda 1 mukombe
▢9 oz (255 g) kirimu yakasviba 1 mukombe mukamuri temp
▢4 oz (113 g) yakanyunguduka bota 1/2 mukombe
▢8 oz (227 g) mukaka 1 mukombe mukamuri tembiricha
▢4 yakakura (4) mazai machena tembiricha yekamuri
▢1/2 tsp (1 tsp) almond mushoma
WASC CAKE MIRAYIRIDZO
Mirayiridzo yekeke iri yakapusa nyore. Chaizvoizvo, isa zvese zvinoshandiswa mumudziyo uye wosanganisa pane yepakati kumhanya kwemaminetsi maviri! Voila! Keke batter yagadzirira. Dururira batter mumaviri akagadzirirwa 8 'mapani uye bika pa350ºF kwemaminitsi makumi matatu nemakumi matatu kana makumi matatu kana kusvika jekiseni remazino rakapinzwa rachena
Usatombo kunetseka nezve chero chemusanganiswa kumashure kwebhokisi, ingoshandisa izvo zvinongedzo zvakanyorwa mune yekubheka. Iyi kamukira inogadzira batter yakakwana yetatu 6'x2 'makeke kana maviri 8'x2' makeke (akatenderera). Iyi kamukira inogadzira makumi mana emakeke nemakeke anenge 1.25 ebatter nekapu yekate. Iwe unogona kutsiva mana mazai machena nemazai matatu akazara kana zvichidikanwa
Kushumira:1g|Makorori:747kcal(37%)|Carbohydrate:120g(40%)|Mapuroteni:8g(16%)|Mafuta:26g(40%)|Mafuta Akaguta:gumi neshanug(75%)|Cholesterol:60mg(makumi maviri%)|Sodium:895mg(37%)|Potassium:162mg(5%)|Fiber:1g(4%)|Shuga:70g(78%)|Vhitamini A:710IU(14%)|Vhitamini C:0.3mg|Calcium:239mg(24%)|Iron:2.7mg(gumi neshanu%)
maitiro ekugadzira modelling chokoreti isina chibage sirasi
maitiro ekugadzira gummy bears kumba
sei kutaurira kana mazai akaomeswa
maitiro ekushongedza keke nhanho
nyore vanilla keke recipe kubva pakutanga